हेलिकप्टरमा देशको नक्शा अंकित केक बोकेर ओलीको जन्मथलो पुग्ने को हुन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more हेलिकप्टरमा देशको नक्शा अंकित केक बोकेर ओलीको जन्मथलो पुग्ने को हुन् ?
हेलिकप्टरमा देशको नक्शा अंकित केक बोकेर ओलीको जन्मथलो पुग्ने को हुन् ?	६ हजारलाई भोज, साडिदेखि भादगाउँले टोपी हुँदै डड्पेनसम्म
फागुन १२ गते, २०७६ - १०:३०
ओलीका पिता, पत्नि, लगायत परिवारका अन्य सदस्यहरु, पार्टीका नेता तथा पूर्व सभा मुख सुवास नेम्वाङ्, खानेपानि मन्त्री विना मगर, भौतिक योजना मन्त्री वसन्त नेम्वाङ्, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, १ नं. प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी, वागमति प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसार्य लगायतका मन्त्रीहरु गरी कुलमा ४ वटा हेलिकप्टर प्रयोग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो ६९ औं जन्मदिन निकै तामझामका साथ मनाए ।
आफ्नो जन्मथलो तेह्रथुमको आठराई पुगेका ओलीले काटेको केकको विषयलाई लिएर अहिले समामाजिक संजाल लगायतमा निकै चर्को आलोचना भईरहेको छ । उनले काटेको केकको आकार नेपालको नक्शा जस्तै भएकोमा मात्रै नभएर भड्किलो जन्मदिवसकोबारेमा समेत व्यापक आलोचना भएको छ ।
कसरी पुग्यो केक ?
बहुचर्चित यति होल्डिङ्का अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा आँफै देशको नक्शा अंकित केक बोकेर आठराई पुगेका थिए । आफ्नै स्वामित्वमा रहेको एअर अल्टिच्युटको हेलिक्प्टरमा केक बोकेर उनी आठराई पुगेका हुन्।
यति कम्पनि उहि विवादित कम्पनि हो, जसलाई नेपाल ट्रष्ट लगायत राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिएर दुरुपयोग गरेको र प्रधानमन्त्री ओलीसँग विषेश र व्यापारिक साझेदार रहको आरोप लाग्दै आएको छ ।
केही समय अघिमात्रै यतिका अध्यक्ष आङ्छिरिङ् शेर्पा र पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको एअर अल्टिच्युटकै हेकिप्टर दुर्घटना हुँदा शेर्पा र अधिकारीसहित ६ जनाको ज्यान गएको थियो । सो दुर्घटना प्रकरणमा समेत मन्त्री अधिकारीलाई शेर्पासँग ओलीले नै पठाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अरु ४ हेलिकप्टर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा र अन्य नेताहरु प्राइभेट हेलिकप्टरमा आठराई पुगेका थिए ।
ओलीका पिता, पत्नि, लगायत परिवारका अन्य सदस्यहरु, पार्टीका नेता तथा पूर्व सभा मुख सुवास नेम्वाङ्, खानेपानि मन्त्री विना मगर, भौतिक योजना मन्त्री वसन्त नेम्वाङ्, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, १ नं. प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी, वागमति प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसार्य लगायतका मन्त्रीहरु गरी कुलमा ४ वटा हेलिकप्टर प्रयोग भएको बताईन्छ । नेपाली सेनाको एमआई ७ सहित दुई र अन्य दुई हेलिकप्टरहरु आठराई पुगेका थिए भने १ नम्बर प्रदेशका जिल्लाका नेताहरु पैदल मार्ग हुँदै पुगेका थिए ।
६ हजारलाई भोज, साडिदेखि भादगाउँले टोपी हुँदै डड्पेनसम्म
जन्मउत्सवमा करिब ६ हजार जनालाई भोजको व्यवस्था गरिएको थियो भने उक्त भोजका लागी झापाबाट क्याटरिङ्को व्यवस्था गरिएको छ । भोजमा शाकाहारी र मांशहारी दुवैको व्यवस्था गरिएको एक सहभागीले बताए ।
भोजमा प्रतिप्लेट कति रुपैयाँका दरले खुवाइएको थियो भन्ने नखुलेपनि सामान्यत शाकाहारी र मांशहारीको गरी सरदर प्लेटको ६५० रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा झण्डै ३९ लाख लागत मुल्य पर्न आउँछ ।
यसैगरी ओलीले झण्डै १ हजार थान भादगाउँले टोपी र स्टकोट वितरण गरेका थिए । टोपी र स्टकोट सेटको मुल्य सरदरमा १५ सयका दरले राख्दा झण्डै १५ लाख रुपैँया पर्न आउँछ ।
ओलीले वितरण गरेका २ हजार थान साडी र पछ्यौरीको औसत मुल्य ३ हजार रुपैँया राख्दा झण्डै ६० लाख बराबरको हुन्छ ।
स्कुले बालबच्चा तथा केटाकेटीका लागी ओलीले झण्डै २ हजार सेट डायरी र डड्पेन वितरण गरेका थिए । यसको औसत मुल्य ५ सय राख्दा १० लाख बराबरको हुन आउँछ ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमा सवा करोड बराबरको खर्च गरेको अन्दाजा गर्न सकिन्छ । यो मुल्य हेलिकप्टर, अन्य उत्सव खर्च बाहेक माथि उल्लेख गरिएका भोज र वितरित सामाग्रीहरुमात्रैको खर्च विवरण हो । यसरी खर्च भएको रकम कसले र कसरी तिर्ने भन्ने बारे केही उल्लेख छैन ।
फागुन १२ गते, २०७६ - १०:३० मा प्रकाशित